Ngakho, namuhla kufanele sifunde kusuka imidlalo zakho phezulu 100 kwi-PC. Noma kunalokho, umane amathoyizi kangcono ikhompyutha yakho, okuyizinto ezingabasiza ukuba uphumule futhi sidlule isikhathi. Ukukhetha akulula - izinhlobo eziningi, wonke umuntu okhetha into ethize. Kodwa, noma kunjalo, ukuthola into efanelekayo Kusengenzeka. Kungcono Yiqiniso, ukwenza phezulu imidlalo 100 kwi PC usebenzisa division zibe izinhlobo. Futhi ngale ndlela sifuna ukubheka okukhethwa best for ukuchitha isikhathi ngesikhathi ikhompyutha.
Yiqiniso, ezihlukahlukene amathoyizi ikhompyutha eziningi. Futhi uma ungazi ukuthi yini okufanele uyenze, ungabheka lesi siqondiso, njengenhlangano indie. Muva nje, zivamile kakhulu. Futhi ngokuvamile share sengonyama wabo ingatholakala esigabeni "Top 100 amageyimu ephansi ekupheleni PC, okuzokwenza ukujabulisa eziningi." Yiqiniso, akubona yokuthi ikhompyutha yakho imidlalo indie bebuthakathaka. Ngokuvamile nje, abantu abaningi bakholelwa ukuthi indie - uhlobo "nedoigra". Njengoba umkhuba ubonisa, lo mbono akulungile.
Kusukela imidlalo indie inganikeza ezithakazelisa kakhulu futhi owaziwa eziningi umkhiqizo - SlenderMan. Okuthusayo-walker ukusinda. Can okwesabisa, kodwa ngezinye izikhathi Screamer okuyisidina uqale ukucasula futhi casula. By endleleni ekhuluma, imidlalo indie lingama horror movie. Kuyinto imfashini ezinjena kwakuhambisana. Uma uthanda ukuthi simulators kangcono, ungazama Ihlathi Village. "Njengokuhlaba Sandbox"? Khona-ke ukulanda eyaziwa njengamanje "Maynkraft". Okuxakayo nje ukuthi ngezinye izikhathi kuthiwa imidlalo njengoba indie. Ngokuvamile, Minecraft kakade bakwazi ukuthatha isikhathi kade waqala ukuwusebenzisa. Futhi sizoqhubeka ukuhlola phezulu 100 imidlalo ohamba phambili ku-PC. Okuningi ngokunembile, silindile uhlu amathoyizi azosiza ukudlula kusihlwa.
Empeleni, horror uhlobo manje ethandwa kakhulu. Futhi uye ukhangwa abadlali abaningi. Ngakho, akunakwenzeka ukuba sicabange phezulu imidlalo 100 ku-PC yakho ngaphandle mikhiqizo. Modern horror movie okuningi. Nokho, i-ethandwa ngempela ezimbalwa kuphela. Ngakho efanayo abathandi ukudlala bakitaza imizwa yakho?
Ngokwesibonelo, kufanelekile esihle umugqa wokulakanyisa Resident Evil. Kunjengoba i "kokudala" (1, 2, 3 kanye Ikhodi Veronica), nokunye ne ukwengeza yesimanje ezintsha Bhalobhasha (4, 5, 6 wamukela izambulo). Empeleni, uma ubheka eduze, izingxenye ezintsha zifana Bhalobhasha. Kodwa manje abaningi kangaka horror amafilimu. Futhi zama I Ububi Obungaphakathi.
Ngithanda ukudlala okusinda, kodwa ngaphandle abacibishelayo? Khona-ke ukusebenzisa ama-SCP: Breach containment. Kube kuyodingeka kukhethwe kusukela eziyinkimbinkimbi zesayensi, zigcwele ezihlukahlukene izilo. Kwaphela isikhathi eside akuzange neze ukulahlekelwa, kodwa okwesikhashana kuyoba okwanele. Ungakhohlwa umdlalo wanamuhla I Ihlathi. Yena isivele abanesifiso indaba yakhe. Futhi phezulu imidlalo 100 kwi-PC yakho sitholakala kweyoku-izikhundla kahle eliphezulu.
Sekusetshenziswa - lena olunye uhlobo ukuthi kukhanga abaningi. Ikakhulukazi intsha. Futhi kunoma iyiphi uhlu the best sekulingisa imidlalo ubambe tebuholi. Ngakho, kukhona eziningana ngempela ezithakazelisayo futhi kukho eyaziwa ukuzijabulisa.
Okokuqala kuyinto Sims. Sikhuluma zonke izingxenye zawo. Ungaphatha kalula ukuphila kobuntu, ukwakha izindlu, sikhule, nokunye. Kunalokho, ngaphezulu ku amantombazane. Guys ngeke asondele lo mshini uhlanga. Into efana Isidingo Ukuze Speed. It is a game ehloniphekile. Futhi ngempela esiqhutshwa phezulu best games amakhompyutha.
Ungakhohlwa mayelana Skyrim, kanye GTA. Umdlalo njalo izakhi of sekulingisa. Eyokuqala ikuvumela ukuya njenge-pilgrim, ohlala ezweni ongaqondakali futhi bemilingo, kwesibili - ukwazi ukuthi yini ukuphila leqembu lezigilamkhuba ejwayelekile. Ngokuvamile endaweni yokuqala GTA V Top 100 PC imidlalo asikwazi wacabanga namuhla ngaphandle le ithoyizi.
Abadlali kanye nekhono ukudlala emdlalweni othize nomngane - yilokhu njengomhlatshelo kwenza kube nokwenzeka onjiniyela ukuthi benze imali enhle. Futhi ezinye okuthiwa ithoyizi wokubambisana azinake. Ziyakwazi phezulu 100 PC imidlalo.
Ngokwesibonelo, balahlwe. Ukudla okuvamile horror movie lapho umgomo oyinhloko - ukusinda. Nokho, noma ukubulala kwalabo abayosinda. Konke kuncike ngakubani okuyo - abadlali noma isilo. "Damned" - kooperativka ejwayelekile. Omunye engakutholi ukudlala it. Futhi, naphezu kokushiyeka yayo eminingi emsebenzini, kusenzima eyayivamile phakathi amathoyizi kangcono amakhompyutha.
Ububi Ohlala, okuyinto sesivele okukhulunywe ngaye ekuqaleni, iwela best games ngezithukuthuku wokubambisana. Ngakho, lokhu kuyithuba elihle ukwenza amanye ezihlukahlukene kule Gameplay. Futhi-ke, akusiyo co-operative, kodwa ongakhetha ngokuhlanganyela kukhona "imidlalo inthanethi". Zama "Dot", Perfect World, Prime World, "Ukufutheka" noma "Counter Strike". Futhi ngeke uzisole! Ngokuvamile, phezulu imidlalo 100 kwi PC kungaba eside. Phela, zonke umdlali kukhona uhlu yami the best. I ezahlukeneyo edume kakhulu futhi evamile aziwayo kakade. Zonke ezinye - isinqumo somuntu ngamunye.
Hyde: ungathintana kanjani Orgrimmar Silvermoon
Sekusetshenziswa ukuzingela: Ukujula Hunter, Deer Hunt Legends, Abazingeli Trophy 2: i-Europa ne-Trophy Hunting
Ukubeka Bemisebe 4 "Ngesikhathi kuvubukulwa": Beznosov Bobby roboglaz "USonia" futhi isitoreji kothile komhlaba
Sponge "Konnyaku": ukubuyekezwa, yokusetshenziswa kanye nezici
Kungani namazinyo skriplyu ngesikhathi sokulala: izimbangela
ULudanka - kuyini, kanjani ukugqoka nokuthi inikeza ini?
Indlela ukupheka risotto nge yenkomo hhayi kuphela